Ndụmọdụ Afọ: Usoro Monroe Na-akpali akpali | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 23, 2008 Fraịde, Ọgọstụ 31, 2012 Douglas Karr
Nwam, Bill, na-ewere klaasị okwu na IUPUI ma kọọrọ m usoro eji akụzi okwu na-akpali akpali, usoro mkpali nke Monroe. Ekwenyesiri m ike na ọ bụ otu n’ime ihe m mụtara mana emesịa chefuo ebe ọ bụ na anọghị m klaasị ogologo oge.
N'ụzọ bụ isi, Alan H. Monroe depụtara usoro usoro n'ime okwu nke rụpụtara nsonaazụ kacha mma na nkwenye. Ka ị na-agụ usoro ndị ahụ na usoro ahụ, ị ​​ga-amalite inwe obere ahụ erughị ala ebe ọ bụ na ị ga-ahụ ụzọ ndị a si na ihe niile site na ntuli aka onye isi ala na azụmaahịa ShamWow.
ige nti - Mee ka ndị na-ege gị ntị lebara anya site na iji akụkọ zuru ezu, ihe atụ na-awụ akpata oyi n'ahụ, ọnụ ọgụgụ dị egwu, nkwupụta, wdg.
mkpa - Gosi na nsogbu nke ị na-ekwu maka ya dị, na ọ dị mkpa, na ọ gaghị agabiga n'onwe ya. Jiri ihe ndekọ, ihe atụ, wdg Mee ka ndị na-ege gị ntị kwenye na ọ dị mkpa ịme ihe.
Na-eju afọ - Ikwesiri idozi nsogbu a. Nye azịza a kapịrị ọnụ ma nwee ike idozi nke gọọmentị ma ọ bụ obodo nwere ike itinye iji dozie nsogbu ahụ.
anya - Gwa ndị na - ege ntị ihe ga - eme ma ọ bụrụ na etinyere azịza ya ma ọ bụ na ọ gaghị eme. Bụrụ onye a na-ahụ anya na nke zuru ezu.
Action - Gwa ndị na-ege ntị ihe ha ga-eme n’onwe ha iji dozie nsogbu ahụ.
Chee echiche banyere itinye usoro a n'ọrụ mgbe ị na-ede blọgụ gị ma ọ bụ ihe ọ bụla ịre ahịa! Ebe ọ bụ na blọọgụ ọ bụla bụ peeji ọdịda na nke onwe ya, ị nwere ohere ime ka onye ọbịa ọ bụla mee ihe. Nara ya n’aka Alan H. Monroe!
Usoro Monroe kpaliri nke ShamWow:
Nwa m nwoke maka echiche maka post!
Tags: marketingmonroemonroes kpaliri usoronkwalin'ire
Ọkt 24, 2008 na 3:41 PM
Amaara m na m kwuru ya na mbụ, mana na Bill ji n'aka bụ otu onye maara ihe! 🙂